နည်းပညာ ပစ္စည်း ဆန်းဆန်းပြားပြားလေးတွေ | Myanmar Free Ads ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / Electronic Products / Favourite Ads / နည်းပညာ ပစ္စည်း ဆန်းဆန်းပြားပြားလေးတွေ
Maung Pauk 12:10 PM Electronic Products , Favourite Ads
နည်းပညာခေတ်မှာ IT နည်းပညာပစ္စည်းဆန်းဆန်းပြားပြားလေးတွေဟာ ဈေးကွက်အတွင်း ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာပါတယ်..
အဲဒီထဲက ဆန်းဆန်းပြားပြား နည်းပညာ ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်..
MiraScreen ဆိုတာ Smart TV မရှိပေမယ့် ရိုးရိုး USB ပေါက်ပါတဲ့ TV ပေါ်ကို ကိုယ့်ဖုန်းထဲက Video ကိုပြသစေတဲ့ ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်..
MiraScreen ကို TV ရဲ့ USB ပေါက်မှာတပ်ဆင်ပြီး အဲဒီ MiraScreen လေးဆီက ထုတ်လွှင့်တဲ့ Wifi ကို မိမိဖုန်းကနေ ဖမ်းယူချိတ်ဆက်ကာ မိမိဖုန်းထဲက Video တွေ၊ Presentation တွေကို TV မှာ ပြသစေမှာပါ.. Laptop နဲ့ လည်း ကြိုးမဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါမယ်.. Device ကို connect လုပ်ပြီး TV ပေါ်မှ password ကို ရယူ ကာ wifi connect လုပ်ရပါမယ်။
ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ မြင်ကွင်းသေးသေးလေးကို မကြိုက်လို့ဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ဖုန်း/Tablet, Laptop ပေါ်က Video နဲ့ Presentation တွေကို TV မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်နဲ့ ကြည့်ရှုပြသချင်ရင်ပဲဖြစ်စေ MiraScreen က အဆင်ပြေပြေ ကူညီပေးသွားမှာပါ..
MiraScreen မှာ RAM - 256MB နဲ့ CPU-Corex A9 1.2GHz ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် Resolution ကျသွားမလား၊ ထစ်သွားမလားကိုလည်း မစိုးရိမ်ရပါဘူး..
အချို့ ဂိမ်းသမားတွေဆို ဖုန်းထဲက ဂိမ်းကို MiraScreen နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ TV ပေါ်မှာ ကြည့်ပြီး ဆော့နေကြပါပြီ..
Wireless နဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Smartphone, Tablet, Laptop ဘယ်အမျိုးအစားနဲ့မဆို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
ဈေးနှုန်းကတော့ တစ်ခုကို 25000 ကျပ်တဲ့..
အမှတ် - ၃၇၄/ မြေညီထပ် /ဗညားဒလလမ်း /တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
📲Phone -09793200004,09 963200004,09450395341 မှာ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဆက်ပြီးဖြစ်စေ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်..
<MiraScreen ဆိုတာ Smart TV မရှိပမေယျ့ ရိုးရိုး USB ပေါကျပါတဲ့ TV ပျေါကို ကိုယျ့ဖုနျးထဲက Video ကိုပွသစတေဲ့ ပစ်စညျးလေးဖွဈပါတယျ..
MiraScreen ကို TV ရဲ့ USB ပေါကျမှာတပျဆငျပွီး အဲဒီ MiraScreen လေးဆီက ထုတျလှငျ့တဲ့ Wifi ကို မိမိဖုနျးကနေ ဖမျးယူခြိတျဆကျကာ မိမိဖုနျးထဲက Video တှေ၊ Presentation တှကေို TV မှာ ပွသစမှောပါ.. Laptop နဲ့ လညျး ကွိုးမဲ့ ခြိတျဆကျနိုငျပါမယျ.. Device ကို connect လုပျပွီး TV ပျေါမှ password ကို ရယူ ကာ wifi connect လုပျရပါမယျ။
ကိုယျ့ဖုနျးရဲ့ မွငျကှငျးသေးသေးလေးကို မကွိုကျလို့ဖွဈစေ၊ ကိုယျ့ဖုနျး/Tablet, Laptop ပျေါက Video နဲ့ Presentation တှကေို TV မွငျကှငျးကယျြကယျြနဲ့ ကွညျ့ရှုပွသခငျြရငျပဲဖွဈစေ MiraScreen က အဆငျပွပွေေ ကူညီပေးသှားမှာပါ..
MiraScreen မှာ RAM - 256MB နဲ့ CPU-Corex A9 1.2GHz ကို အသုံးပွုထားတဲ့အတှကျ Resolution ကသြှားမလား၊ ထဈသှားမလားကိုလညျး မစိုးရိမျရပါဘူး..
အခြို့ ဂိမျးသမားတှဆေို ဖုနျးထဲက ဂိမျးကို MiraScreen နဲ့ ခြိတျဆကျထားတဲ့ TV ပျေါမှာ ကွညျ့ပွီး ဆော့နကွေပါပွီ..
Wireless နဲ့အသုံးပွုနိုငျတဲ့ Smartphone, Tablet, Laptop ဘယျအမြိုးအစားနဲ့မဆို ခြိတျဆကျအသုံးပွုနိုငျပါတယျ..
စြေးနှုနျးကတော့ တဈခုကို 25000 ကပျြတဲ့..
အမှတျ - ၃၇၄/ မွညေီထပျ /ဗညားဒလလမျး /တာမှမွေို့နယျ၊ရနျကုနျမွို့။
📲Phone -09793200004,09 963200004,09450395341 မှာ လူကိုယျတိုငျဖွဈစေ၊ ဖုနျးဆကျပွီးဖွဈစေ ဝယျယူနိုငျပါတယျ..>
2. Smart Potable Projector with Speaker
နည်းပညာထွန်းကားတဲ့ခေတ်မှာ Projector အကြီးကြီးတွေမလိုတော့ပါဘူး.. Smart Potable Projector သေးသေးလေးတစ်ခုရှိရုံနဲ့ အဆင်ပြေပါပြီ.. အိတ်ထဲမှာထည့်ပြီး ဘယ်သွားသွားသယ်ယူသွားနိုင်တဲ့ Smart Potable Projector လေးဟာ ပိတ်ကားမြင်ကွင်း လက်မ ၆၀ ထိ ချဲ့နိုင်ပါတယ်.. Micro SD နဲ့ထည့်ပြီးသုံးနိုင်သလို ကွန်ပျူတာ၊ EvD, DVD စက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ USB, HDMI ပေါက်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်.. နားကြပ်ပေါက်လည်းပါပါတယ်..
ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးက HD ရုပ်ထွက်အနေနဲ့ 560P,480P,720P,1080p, 640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1280*1024,1280*720,1440*900,1920*1080,1366*768,1280*800,1440*960,1600*1200,1680*1050 အထိ ထွက်ပါတယ်။ အသံအတွက် Speaker လေးလည်းပါဝင်ပြီးသားပါ..
Brightness အနေနဲ့ 400-600 lumens ရပြီး
Contrast အနေနဲ့ 800:1 ပါ။
Light က LED ကနေ အလုပ်လုပ်ပြီး
LED Life Time - 30000 hours ထိရပါမယ်။
Focus Mode အနေနဲ့တော့ Manual ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။
Projector Distance အနေနဲ့ 0.8-2M အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး
Projector Size အနေနဲ့ 24-6- inches ဘဲရှီပါတယ်။
Projector Ratio 1.6:1 ဘဲရှိပါတယ်။
Language အနေနဲ့ 23 Language ပါဝင်ပါတယ်။
Power အနေနဲ့ 5V-2A ဘဲ အသုံးပြုတဲ့အတွက် ဒါတိုက်သုံးသုံး Power bank နဲ့သုံးသုံး အဆင်ပြေမယ်ဆိုဒါမမှားပါဘူးခင်ဗျာ ။
Multi medias Function အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်
Audio တွေဆိုရင် MP3/WMA/OGG/AAC/FLAC/APE/WAV အကုန် ဖတ်သလို
Picture အနေနဲ့ PEG/BMP/PNG ကြည့်လို့ရသလို
Video အနေနဲ့ Full Format Support အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် ဘာမှ မဖတ်တာမရှိတော့ပါခင်ဗျာ။
Text အနေနဲ့ပါ ကြည့်လို့ရတဲ့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေလှပါတယ် ။
MiraScreen ကို ဒီ Projector လေးမှာတပ်ပြီး ဖုန်းပေါ်က Video, Presentation တွေကိုလည်း ပြသနိုင်ပါတယ်..
ဈေးနှုန်းက 95000 ကျပ်ဖြစ်ပြီး Favourite Online Store
<နညျးပညာထှနျးကားတဲ့ခတျေမှာ Projector အကွီးကွီးတှမေလိုတော့ပါဘူး.. Smart Potable Projector သေးသေးလေးတဈခုရှိရုံနဲ့ အဆငျပွပေါပွီ.. အိတျထဲမှာထညျ့ပွီး ဘယျသှားသှားသယျယူသှားနိုငျတဲ့ Smart Potable Projector လေးဟာ ပိတျကားမွငျကှငျး လကျမ ၆၀ ထိ ခြဲ့နိုငျပါတယျ.. Micro SD နဲ့ထညျ့ပွီးသုံးနိုငျသလို ကှနျပြူတာ၊ EvD, DVD စကျတှနေဲ့ခြိတျဆကျဖို့ USB, HDMI ပေါကျတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ.. နားကွပျပေါကျလညျးပါပါတယျ..
ရုပျထှကျအရညျအသှေးက HD ရုပျထှကျအနနေဲ့ 560P,480P,720P,1080p, 640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1280*1024,1280*720,1440*900,1920*1080,1366*768,1280*800,1440*960,1600*1200,1680*1050 အထိ ထှကျပါတယျ။ အသံအတှကျ Speaker လေးလညျးပါဝငျပွီးသားပါ..
Brightness အနနေဲ့ 400-600 lumens ရပွီး
Contrast အနနေဲ့ 800:1 ပါ။
Light က LED ကနေ အလုပျလုပျပွီး
LED Life Time - 30000 hours ထိရပါမယျ။
Focus Mode အနနေဲ့တော့ Manual ပွုလုပျပေးရပါမယျ။
Projector Distance အနနေဲ့ 0.8-2M အတှငျး အသုံးပွုနိုငျပွီး
Projector Size အနနေဲ့ 24-6- inches ဘဲရှီပါတယျ။
Projector Ratio 1.6:1 ဘဲရှိပါတယျ။
Language အနနေဲ့ 23 Language ပါဝငျပါတယျ။
Power အနနေဲ့ 5V-2A ဘဲ အသုံးပွုတဲ့အတှကျ ဒါတိုကျသုံးသုံး Power bank နဲ့သုံးသုံး အဆငျပွမေယျဆိုဒါမမှားပါဘူးခငျဗြာ ။
Multi medias Function အလုပျလုပျတဲ့အတှကျ
Audio တှဆေိုရငျ MP3/WMA/OGG/AAC/FLAC/APE/WAV အကုနျ ဖတျသလို
Picture အနနေဲ့ PEG/BMP/PNG ကွညျ့လို့ရသလို
Video အနနေဲ့ Full Format Support အလုပျလုပျတဲ့အတှကျ ဘာမှ မဖတျတာမရှိတော့ပါခငျဗြာ။
Text အနနေဲ့ပါ ကွညျ့လို့ရတဲ့အတှကျ အရမျးအဆငျပွလှေပါတယျ ။
MiraScreen ကို ဒီ Projector လေးမှာတပျပွီး ဖုနျးပျေါက Video, Presentation တှကေိုလညျး ပွသနိုငျပါတယျ..
စြေးနှုနျးက 95000 ကပျြဖွဈပွီး Favourite Online Store